Oclean X Pro Smart borosy nify - Adino ny mpitsabo nify | TeraNews.net
Oclean X Pro borosy nify hendry - manadino momba ny mpitsabo nify
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 01.11.2021
Tsy mila fampidirana ny vokatra marika Oclean. Raha ny vokatra momba ny fahadiovana am-bava dia ity marika ity no tonga voalohany amin'ny famonjena. Ny mpanamboatra dia nahavita nampifangaro ny teknolojia avo lenta amin'ny fampiasana mora, manome ny mpividy ny entana amin'ny vidiny tsara indrindra. Ny borosy nify maranitra Oclean X Pro dia tsy miavaka. Ny zavatra mahafinaritra dia ny mpanamboatra dia nanao ny vokatra mety ary nahafahana nividy izany tamin'ny vidiny mirary.
Oclean X Pro borosy nify maranitra - tombony
Azo antoka fa ny vidiny mora no tena tombony. Ankoatr'izay, ao amin'ny fizarana misy azy, ny marika Oclean dia tsy manana mpifaninana maro. Eto ambany ianao dia afaka mahita ny antsipiriany amin'ny fampitahana ny Oclean X Pro, ohatra, amin'ny marika Oral-B malaza.
Ny tombony amin'ny borosy nify marani-tsaina Oclean X Pro:
Fitantanana mahafinaritra. Ny fisian'ny efijery mikasika ny diagonal ny 0.96 santimetatra dia azo antoka fa tsy overkill. Maninona raha manome ny tompony ny fanaraha-maso intuitive sy ny fanomezana ny fomba voafantina. Tsy ilaina ny manindry ny bokotra, mifidy fomba mety - ny zava-drehetra dia tena tsotra. Raha ny marina, ny famolavolana ny borosy nify dia tsy nisy fiantraikany. Mifanohitra amin'izany, ny Oclean X Pro dia toa gadget amin'ny ho avy.
Fanadiovana nify avo lenta. Ny maotera tsy misy borosy Maglev dia mahavita mihetsika hatramin'ny 42 isa-minitra. Be dia be izany, na dia ho an'ny borosy nify elektrika aza.
Smart nify rafitra fanadiovana. Ny Oclean X Pro dia manana gyroscope afaka mamantatra ny fizotry ny hetsika, ny zoro ny fironany ary ny fanerena ny borosy amin'ny enamel nify. Eny, izany indrindra no mbola tsy hitantsika tamin'ny borosy nify tetibola.
Fomba fanadiovana maro. Ataovy ny matematika - 3 fanadiovana fomba (tsy tapaka, Whitening sy fanorana). 32 haavon'ny hamafin'ny (miaraka amin'ny fomba miasa - efa 96 fiovana). Ary toe-javatra 20 hafa efa vonona ho fahatsiarovana ny borosy nify Oclean X Pro. Tsy zava-misy fa hampiasa azy rehetra ny tompony, fa hahita safidy mety amin'ny miborosy nify izy.
Fahaleovantena tena tsara. Ny mpanamboatra dia milaza fa ny borosy dia hiasa mandritra ny 30 andro amin'ny bateria tokana. Raha ny tokony ho izy dia adiny 2 monja ny famandrihana ny bateria. Na dia amin'ny fanadiovana mafimafy aza, ny Oclean X Pro dia mihoatra ny in-2-3 ny mpifaninana aminy amin'ny resaka fotoana fiasana.
Borosy nify Oclean X Pro vs Oral-B iO 8
Misy olona hilaza fa tsy afaka mampitaha ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra sinoa amin'ny marika malaza any Alemaina ianao. Ary ho diso izany. Raha ny zava-bitany, Oclean dia nihoatra ny mpifaninana lafo vidy kokoa Oral-B. Eny, misy lesoka amin'ny drafitra famatsiana. Ohatra, ny Oral-B iO 8 dia tonga miaraka amin'ny toby fiantsonan'ny magnetika ary manana fameram-potoana misy famantarana mazava. Saingy ny fandoavana avo roa heny noho ireo nuance ireo dia lafo.
mpanamboatra Oclean X Pro (Shina) Oral-B iO 8 (Alemaina)
Ny fiainana amin'ny fiampangana tokana 30 andro 14 andro
Fampisehoana loko fa fa
Fifandraisana smartphone Eny (fanaraha-maso fanadiovana feno) fa
Fomba fanadiovana 3 (misy fametrahana 20) 6
haavon'ny hamafin'ny 32 1
teknolojia fitarafana andriamby
Endriky ny loha borosy Boribory somary lavalava manodidina
Fanadiovana isan'andro fa fa
Fikarakarana gum fa fa
Fanadiovana matihanina No fa
Fanadiovana lela No No
Fanaraha-maso ny tsindry
Fambara mazava ny fanadiovana marina (diso). No fa
Timer amin'ny fotoana fanadiovana fa fa
hovitrovitra fa fa
vidiny soso-kevitra $120 $300
Ao amin'ny tontolon'ny marika sinoa Oclean, ny borosy nify marani-tsaina Oclean X Pro dia navoaka miaraka amin'ny fiantohana ofisialy 2 taona mpanamboatra. Izany dia manondro fa ny orinasa dia mamokatra vokatra tena avo lenta. Afaka mandefa entana avy any amin'ny trano fanatobiana entana any Polonina na Rosia ny mpivarotra - miantoka ny fandefasana entana haingana amin'ny mpividy izany.
Azonao atao ny mividy ny borosy nify Oclean X Pro amin'ny ity rohy ity amin'ny aliexpress... Manoro hevitra izahay hampiasa tapakila fihenam-bidy:
SPTOWH150 (baiko mihoatra ny 690 roubles - fihenam-bidy 150 roubles).
SPTOWH250 (baiko mihoatra ny 1290 roubles - fihenam-bidy 250 roubles).
SPTOWH350 (baiko mihoatra ny 1990 roubles - fihenam-bidy 350 roubles).
SPTOWH450 (baiko mihoatra ny 2690 roubles - fihenam-bidy 450 roubles).
SPTOWH600 (baiko mihoatra ny 3490 roubles - fihenam-bidy 600 roubles).
SPTOWH800 (baiko mihoatra ny 4890 roubles - fihenam-bidy 800 roubles).
Ny robot Tesla Bot dia fialamboly vaovao an'i Elon Musk
DAC Topping E30 - topimaso, famaritana, endri-javatra